HomeWararka CaalamkaMidowga Yurub oo isbadal ku sameenaya Sharciyada Qaabilaada Qaxootiga
September 23, 2020 Wararka Caalamka, Wararka Denmark, Wararka Finland, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Kaliya tiro ka mid ah wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub ayaa diyaar u ah inay qaabilaan magangalyo-doonka iyadoo taasi ay jirto Guddiga Yurub wuxuu isku dayayaa inuu dib-u-habeyn ku sameeyo xeerarka magangalyada ee ururka.
Guddiga Yurub ayaa miiska soo saaray qorshe Arbacada maanta oo looga gol leeyahay in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka magangalyada ee ururka loona abaabulo si caddaalad ah dib-u-qeybin loogu sameeyo magangalyo-doonka guud ahaan Midowga Yurub. Waa qorshihii ugu dambeeyay ee isku mid ah, inkasta oo aan lagu guuleysan, iskuday dib-u-habeyn ah oo la sameeyay 2015 iyo 2016.
Waxaa kaloo Midowga Yurub soo bandhigay in Wadamada aanan Qaxootiga qaadan karin ay taasi badalkeeda la wareegaan Shaqada Dib u celinta Qaxootiga dib loogu celinayo wadamadooda iyo adkeynta Xaduudaha wadamada MidowgaYurub.
Dabka dhawaan baabi’iyay xerada qaxootiga ee Moria oo ku taal jasiiradda Giriigga ee Lesbos, ayaa keentay in Madaxa Gudiga Yurub Ursula von der Leyen ay keento inay tirtirto oo ay bedesho heshiiskii Dublin ee jiray kaasoo xukumayay halka ay dadku magangalyo ka codsan karaan EU-da.
Laakiin ogolaansho la isla oggol yahay oo lagama maarmaan u ah isbedel weyn oo xagga siyaasadda magangelyada ah, uma badna in qaab-dhismeedka cusubi uu u baahan doono waddammada inay qaataan qaxootiga iyo magangelyo-doonka maadaama xubno badan oo ka tirsan Midowga Yurub ay diideen nooc kasta oo dib-u-qaybin qasab ah.
Muranka u dhexeeya dowladaha Midowga Yurub ee ku saabsan cidda qaadan doonta qaar ka mid ah 12,000 oo magangelyo-doone ah oo ka yimid Lesbos ayaa muujineysa sida arrinta loo siyaasadeeyay.
Turjumay Somaliska Berlin